कोरियाको फारम बुझाउने कुपन लिनै कुकुरले नपाएको दुख
[2014-08-14 오전 8:35:00]
मंगलबार रातीको साढे दशबजेको थियो। दिनभरी संसद्को कचहरीको रिपोर्टिङ सकेर घर फर्कदै थिए। जब बल्खु त्रिवि गेट अगाडि पुगेँ अरु साँझ भन्दा भिन्न अनुभव भयो। रात निकै छिप्पिदा पनि घुँइचो नै थियो। मोटरसाइकल स्पिड कम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो। सयौं संख्यामा युवायुवतीलाई केही दर्जन प्रहरी हाते माइकमा निर्देशन दिइरहेका थिए।
मलाई लाग्यो ग्याङ्गफाइट त भएन? तर विस्तारै त्रिवि गेटबाट ल्योब्रोटरी स्कुलतर्फ बढ्दै जादा मेला जस्तै देखियो। आधा किलोमिटरको सडक ढाकिएको थियो। ती मध्ये प्रहरीको निर्देशन अनुसार कतिपय लाइनमा उभिइरहेका थिए। कोही भीँडको मौका छोप्न राखेका फुटपाथे र नांग्ले पसलबाट पफ, दुनोट, चाउचाउ, चिसो र पानी खादै थिए। पत्रकारको मन के मान्थ्यो! फेरि रिपोर्टिङ सुरु गरे।
एक युवकसँग पुछताछ गर्दा थाहाँ भयो– कोरिया जाने भाषा परीक्षाको जाँचमा सामेल हुन कुपन लिने भीड रहेछ। दक्षिण कोरियाली सरकारको नेपालीलाई कोरिया लाने पाचौं संस्करणका लागि कोरियन भाषाको परीक्षाको आवेदन संकलन हुँदै रहेछ। असोज १० र ११ गते हुने परीक्षामा सहभागी हुन आवश्यक फारम बुधबार र बिहिबार बुझाउन आवश्यक कुपनका लिनका लागि ती युवाहरु लाइन लागेका रहेछन्।
त्यतिबेला पनि झण्डैं हजार हाराहारी युवा लाइनमा थिए। त्यसैबिच भर्खर लाइन पार गर्दै कुपन हातमा लिएर ठूलै युद्ध जितेजसरि एक युवक बाटो लाग्दै थिए। मैले उनलाई रोकेर सोधे, भाइले कुपन लिनुभयो? उनले भने– पाए दाई। उदयपुर घर बताउने २० वर्षीय अशोक राइले १८०३ नम्बरको कुपन देखाउँदै भने, 'दिउँसो ३ बजेदेखि लाइन बसेर अहिले पौने ११ बजे बल्ल पालो आयो।'
दुई महिनादेखि राजधानीमा बसेर कोरियन भाषा अध्ययन गरीरहेका राईले फारम बुझाउन फेरि बिहिबार पनि यस्तै लाइनमा बसेर अर्को घम्साघम्सी गर्नु छ।दिनभरि लाइनमा बस्दाको भोक, प्यास र थकानबाट गलेका राईले भने, 'स्वदेशमा काम नपाएर विदेशै गएर भए पनि पसिना बगाउ भन्दा यस्तो सास्ती हुन्छ। यहाँ सिस्टम नै छैन।'
राईभन्दा दश मिनेटजति पछि १८३१ नम्बरको कुपन पाएपछि खुसीले बुरुक बुरुक हुँदै नवलपरासीका पिताम्बर खनाल लाइनबाट निस्किए। उनको पीडा राई भन्दा फरक छैन। 'बुटवल भन्दा राजधानीमा सजिलो होला भनेर फारम बुझाउन यता आइयो, कुकुरले नपाउने दुख पाइयो,' उनले भने। 'सरकारको नीति नियम अनुसार विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म अफिस टाइम हुने तर त्यहि सरकारी निकायको मातहतमा सञ्चालन हुने भाषा परीक्षाको फारम लिन र बुझाउने कुपनका लागि मध्येरातसम्म भिड्नु पर्ने?,' खनालले निरास हुँदै भने।
विदेशीले रोजगारीका लागि तीनचार हजार युवा लान्छु भन्दा पनि व्यवस्थित तबरले फारम बुझाउने व्यवस्थासम्म गर्न सक्दैन भने यस्तो सरकारबाट के अपेक्ष गर्ने? उनले भने।बुधवार बिहान ६ बजे त्यहिँ ठाउँमा आइपुग्दा पनि त्यो भिड कम भएको थिएन। सडकको एक साइडमा ससाना पाल टाँगेर चियापसलदेखि फोटोकपी मेसीन राखेर मानिसहरु बसीरहेका थिए।
मध्यरातमा कुपन वितरणमा खटिएका कर्मचारीले ल्याब्रोटरी स्कूलभित्रै केही घण्टा विश्राम लिए। सयौंको संख्यामा देशको विभिन्न भागबाट राजधानी आएका युवायुवती भने कतिपयले विच सडकमा खुला आकासमुनी नै रात विताए।
बुधवार संसद्को बैठकमा झण्डै दुई दर्जन सभासद्ले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पिडितलाई न्यूनतम उद्धार तथा राहात कार्यक्रम समेत दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सभासद्ले सरकारको आलोचना गरेको सुनेर फर्के।
कोरियामा रोजगारीको सपना देखेर कुपन हातपार्दै बाहिरीएका राई र खनालको सम्झना पनि मलाई उत्ति नै आइरहेको छ। परदेशिएर घरपरिवार पाल्छु भन्नेलाई कागजको चिर्कटो व्यवस्थित तबरले दिन नसक्ने सरकारले सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा, दोलखा लगायत जिल्लाका बाढी र पहिरो पिडितलाई बचाउन राहात वितरण कसरी व्यवस्थित गर्न सक्ला?
ती युवाहरुले विदेशमा गएर रातदिन काम गरेर पठाएको रिमीट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र अडेको छ। तीनकै कमाईबाट पोसिएर सदन र सडकमा गुडि्ड हाक्ने सरकारले यो सास्तीका बारेमा सोच्ला की !